Nhọrọ nke akwụkwọ akụkọ dị egwu
Nyocha akwụkwọ akụkọ dị egwu
3 akwụkwọ CS Lewis kacha mma
Anyị na -ebi ihe nkiri na -agbawa agbawa na -aga n'ihu nke nnukwu akụkọ ifo. Ọ dabara nke ọma (kama na-enwe ohere) zigara ya na nnukwu ihuenyo iji gosi fx nke avant-garde. Mana nnukwu akwụkwọ akụkọ Tolkien (ezigbo enyi Lewis), nke CS Lewis n'onwe ya ma ọ bụ ọbụna ugbu a George RR ...
3 akwụkwọ JK Rowling kacha mma
Na agbanyeghị iji pseudonyms ndị dị ka Robert Galbraith ma ọ bụ ọbụna mbiri nke kacha ewu ewu bụ JK Rowling, onye edemede Britain a na akụkọ akụkọ ya na-ebi. Ọ na-emekarị n'akụkụ dị iche iche nke ndị ama ama ụdị niile. N'okwu gbasara anyị, Joanne Kathleen Rowling (...
3 akwụkwọ kacha mma nke David Foster Wallace dere
N'agbanyeghị na ọ bụ onye ama ama na United States, mbata nke ọrụ David Foster Wallace na Spen bịara dịka ngosipụta akụkọ ifo mgbe ọ nwụsịrị. N'ihi na David nwere nkụda mmụọ nke na -enye ya nsogbu site na nwata ruo ụbọchị ikpeazụ ya mgbe ọ ...
The Nature of Middle-earth, nke Tolkien dere
N'ihe banyere eluigwe na ala akụkọ ihe mere eme nke JRR Tolkien mepụtara, echiche efu na -agbanahụ site n'ahịrị ahụ yiri ibe ya, site na ịgafe na oghere echepụtara nke ọma nke ọma na ndụ siri ike ruo oghere ndị a na -ahụ anya. Eziokwu nwere akụrụngwa nwere onwe ya ebe ọ dịla anya ọ gbawara ...
Akwụkwọ ọgụgụ efu 5 kachasị mma
Fantasy bụ ụdị edemede nke nwata na ntozu oke na -ezukọ ọzọ n'agbanyeghị ihe niile. Ụgwọ ọrụ ahụ bụ ihe ụtọ nke paradaịs ahụ mmadụ bi n'oge ọ bụ nwata wee nwetaghachi ekele maka ọmarịcha mgbe afọ na -agbago n'azụ anyị. N'ihi ya, ihe kacha mma ...
Ọmụmụ nke dike, nke Jin Yong dere
Tụnyere ụfọdụ ederede n'ime ụwa na Tolkien na -ada ụda dị nsọ. Yabụ ịchebe Jin Yong dịka onye nnọchi anya onye China nke Britain yiri ka ọ bụ ihe na -adịghị asọpụrụ ma na -ere ahịa dị egwu. Ruo mgbe ị ga -achọpụta iru Yong na n'agbanyeghị na ọ na -adọta karịa ...
The Ghost na Oriakụ Muir, nke RA Dick dere
Ọ bụrụ na Alaska hụrụ zombie n'anya ma kọwaa ya nne na nna ya, gịnị kpatara na Oriakụ Muir agaghị enwe mmekọrịta ịhụnanya ya na mmụọ ụlọ na -enweghị ebe obibi? Ihe niile bụ ihe gbasara oge na ụdị. Oge na -echere ka ọ kpọga gị na ...
3 akwụkwọ Lewis Carroll kacha mma
N'agbata ọrụ dịka The Little Prince nke Antoine de Saint Exupéry na The Neverending Story nke Michael Ende dere, ọ ga -achọpụta nnukwu njem Alice na Wonderland. Ọgụgụ dabara adaba maka ụmụaka ọ bụghị nwata. Na -arụ ọrụ na -ejupụta n'echiche efu na nke uru mmadụ enweghị atụ. N'ime ndị…
Etiti abalị Sun nke Stephenie Meyer dere
Ma mgbe ọ dị ka ebugharị Stephenie Meyer gaa n'ọgụ edemede ndị ọzọ, na igodo nke akwụkwọ akụkọ mpụ, yana nnwere onwe nke o chere n'ihe gbasara chi ojiji, na vampires ndị na -eto eto na ọmịiko ha na -esi ísì garlic na mgbe ebighi ebi, n'ikpeazụ ọ gaghị adị. N'ihi na Meyer ...
Ndụ Mbụ iri na ise nke Harry August nke Claire North dere
Ihe ọchị na ọdachi nke ndụ na -amụba nke ukwuu n'ụdị ọrụ ụfọdụ nke na -anọchite anya onye anyị bụ n'ụdị akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ ifo, dị ka njem oge ma ọ bụ ikwughachi ihe ugboro ugboro. Ihe ngosi Truman, tọrọ atọ na oge, Benjamin Button, ọbụlagodi nnukwu azụ… ndị a niile…